China Amphibious Excavator ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Bonovo
N'ihe niile 3D na nhazi eserese:
Spud okporo osisi System
A na-etinye Spud na Hydraulic Mechanism na osote pontoon mechiri emechi, nke arụnyere n'akụkụ abụọ nke ngwupụta amphibious. Enwere ike iji ike hydraulic iji chịkwaa ntụgharị ihu ma ọ bụ elu. A na-ekpebi ogologo ya site na omimi nke mpaghara ọrụ. A na-ewu spuds mgbe ọ na-arụ ọrụ, wee tinye ya n'ime apịtị site na usoro hydraulic. Ojiji nke spuds ga-eme ka nkwụsi ike nke ngwa ọrụ rụọ ọrụ nke ọma na mmiri.
Ihe osise ihe osise:
Pontoon na-ewepụ pụtara na anya nwere ike gbanwee na-akpaghị aka n'etiti pontoon abụọ n'otu oke. Mgbe a na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ọnọdụ arụ ọrụ dị warara, a pụrụ ibelata pontoons dị n'etiti etiti oge ị na-arụ ọrụ. Na ọrụ nke oghere ukpụhọde, anyị nwere ike inyere welie Chassis kwụsie ike ma melite ọrụ arụmọrụ nke ndị ahịa.
3 Chains Design: Mgbe agbụ ahụ ejiri oge ụfọdụ, ọkwa ahụ ga-abawanye n'ihi iyi nke pin bushing, nke ga-eme ka eriri ahụ niile toro ogologo ma mekwaa ịwụfu ma ọ bụ na-amị amị mgbe ọ na-eje ije. Ọ ga-emetụta ọrụ ahụ nke ọma. Ngwaọrụ na-eme mkpọtụ nwere ike hụ na agbụ igwe na ezé ezé na-arụ ọrụ nke ọma site na ịhazi ọnọdụ nke oghere. Mkpọchi bolt bụ nhazi ọkọlọtọ nke pontoon anyị. Cilinda tightening dị mfe karịa bolt tightening, nke nwere ike ime ka nguzozi itule ma hụ na enwere ike na ịrụ ọrụ nke ọma na-eje ije.
Ọrụ nnwale & ule ọtụtụ ọrụ - ogologo ije na dọkụ ụkwụ
Na ọdabara Environment:
- Ala apịtị na-ekpocha na ebe a na-egwupụta akụ, ihe ọkụkụ na ebe a na-ewu ala Wetland mweghachi na ndozi
- Mgbochi na njikwa idei mmiri oru mmeghari mmiri Ntughari nke saline-alkali na ala di ala Mimi nke kanaal, uzo mmiri na onu mmiri Ikpochapu Osimiri, oke osimiri, ọdọ mmiri na osimiri
- Igwu ala olulu maka itinye mmanu na mmanu gas
- Mmiri mmiri
- slọ odida obodo na mmezi gburugburu ebe obibi
Akpa loading na Mbupu: Anyị na-eme irè loading atụmatụ ịzọpụta ibu gị na-eri na-eri.
A ga-edozi usoro iwu gị site na usoro ndị a
Nke gara aga: Akpụkpọ ụkwụ
Osote: Ọkara Excavator
amphibious excavator maka mgbazinye
amphibious excavator maka ire ere
amphibious excavator na-emepụta ihe
ọnụahịa amphibious excavator
ihe na-ese n’elu mmiri
apiti buggy excavator
apịtị excavator maka ire ere